Awusenakho ukwehlisela kwi-iOS 7.1.2 | IPhone iindaba
Kuthathe ixesha elide kunokuba bekulindelwe, kodwa umzuzu owoyikekayo ufikile: U-Apple uyekile ukusayina i-iOS 7.1.2, ke akusenzeki ukufaka olu hlobo lwenkqubo yokusebenza kwizixhobo zethu ezinokuthi ziphuculwe ziye kwi-iOS 8. Kude kube ziiyure ezimbalwa ezidlulileyo kungenziwa ngokulula, nge-iTunes, ngaphandle kwengxaki encinci nangokuphela kwemfuno ukhuphele uguqulelo lwesoftware efanelekileyo yesixhobo sethu, kodwa ungaze uphinde, ubuncinci ngokusemthethweni.
I-hacker eyaziwayo iH8sn0w, umyili wezixhobo ezahlukileyo ngaphambili ezazivumela ukukhutshelwa kuhlobo olungasayiniwanga ngu-Apple, ukwazisile oku, watsho nangokuvula umnyango wethemba: «Ngoku ulonwabo luqala«. Kwaphela iiveki yena kunye nabanye abahlaseli bebeka i-tweeting malunga nokuthotywa, okanye indlela yokuthotywa kwinguqulelo engatyikitywanga ukuya kwenye. Kodwa asinalo ulwazi malunga nokuba oku kusondele okanye ukuthelekelela nje.
Kulungiselelwe abo bangaziyo ngqo ukuba isebenza njani yonke le nto sinokuthi xa iApple ikhupha ingxelo entsha iyeka ukusayina eyangaphambili. Olu tyikityo luyimfuneko ukufakela olo hlobo nakweyiphi na izixhobo zabo, ke le nkqubo yeCupertino iqinisekisa ukuba kuphela ezo nguqulelo ze-iOS bazifunayo ezinokufakwa kwizixhobo zeapile, ngokubanzi ezifumaneka kutshanje ngesixhobo ngasinye. Umzekelo, kwi-iPhone 4 ingxelo yokugqibela ikhoyo ingu-7.1.2, kwaye iApple iya kuhlala iqhubeka ukusayina, kodwa hayi kuzo zonke izixhobo ezilandelayo, ezisayina i-iOS 8.0 kwaye kungekudala izakusayina i-iOS 8.0.2 kuphela.
Ukuba esinye sezibonelelo zeApple kukuba ibonelela ngohlaziyo kwizixhobo zayo iminyaka eliqela,kutheni umntu engafuni kuhlaziya? Ngenxa yezizathu ezininzi: kuba ukusebenza kwesixhobo sakho kubhetele kuhlobo oludala, kuba ukhetha ubuhle kuguqulelo oludala, okanye (kwaye esi sesona sizathu siphambili) sokugcina i-JAilbreak. Masikhumbule ukuba okwangoku kuphela kweJailbreak ekhoyo eza kwi-iOS 7.1.2 kwaye asazi ukuba iyakuba nini enye ye-iOS 8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » Awusenakho ukuthotywa kwi-iOS 7.1.2
Iividiyo ezimbini ezibuza ubukho beBendgate
Uhlaziyo lweGoodReader lokuthatha ithuba lokuqhubeka kunye neempawu zeDrive Drive